I-Tomah Retreat, PHEFUMELA ngeFireplace kunye neGarden Sauna kufuphi neBotanic Gardens
I-boudoir entle enomandlalo we-Ergo Flex oyinkosi enombono ongaphaya komkhusane webhafu yonyawo lwakho kunye nendawo yomlilo. Incanyathiselwe kwindlu enkulu kunye nomnyango wayo wabucala, i-CHILL ligumbi ofuna ukuchitha ixesha kunye nalo xa ufuna ukubaleka kuyo yonke. Ukusuka ebhedini yakho ujonge phandle ngeekhethini zegauze kwibhafu yonyawo lwakho apho ufika kwibhafu yesiFrentshi apho unokuhlambela ebhafini yakho ngombhobho weshawari ophathwa ngesandla orhangqwe zizivalo zamaplanga ukwenza indawo yabucala etofotofo. Ibandakanya eyakho indawo yomlilo, itoaster, umatshini wekofu, imicrowave, ipleyiti eshushu kunye ne-egg poacher. Kwaye ungalibali ukuba ufumana imizuzu engama-45 yesauna ye-infrared yasimahla emi-2 ngosuku ngalunye lokuhlala kwakho.
Wamkelekile kwiTomah Retreat, ifama encinci exabisekileyo yokuzonwabisa kwi-5 acres eluhlaza kwiiNtaba zeBlue apho ekuphela kwento elinywayo yimifuno enodoli omkhulu wothando novelwano.
I-Tomah Retreat ibe sisiseko seNdlu yamazwe ngamazwe yeReiki kunye neeklasi zokucamngca ukususela ngo-2002 kwaye iyaqhubeka injalo. Xa ingaxakekanga ngaloo nto, idala indawo yokuphilisa abantu, kunye nezibini ezijonge ukubaleka kwilizwe elixakekileyo. Ngamanye amazwi - WENA.
Indlu kaBronwen kwipropati ibucala, kodwa unokuhlala efikeleleka ngokubhaliweyo okanye ngefowuni kwaye uya kuba khona ngokukhawuleza ukuba uyamfuna.